Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chivabvu 28, 2021
Vatongi vematare maviri epamusoro soro eSupreme Court neConstitutional Court vanopindawo mugakava riri panyaya yaVaLuke Malaba zvichitevera kusvitsa kwavaita magwaro avo kuSupreme Court izvo zvava kureva kuti vose havakwanisi kunzwa nyaya yaVaMalaba.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 paBondolfi Teachers College hwakakwira kusvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi muongoro dzakaitwa nezuro.
Munyika mose vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vatatu vakafa muBulawayo nechirwere ichi nezuro wakare.
Vatungamiri venyika dziri muSADC Troika havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi weDouble Troika wakaitirwa kuMozambique nezuro uyo wainge wakanangana nehondo iri mudunhu reCabo Delagado kuMozambique kwakare.
Mutori wenhau, Jeffrey Moyo, anomiswa pamberi pedare muBulawayo achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda munyika magweta ake achiti mapurisa akatyora mitemo inoabvumidza kuchengeta musungwa asati amiswa pamberi pedare.
Mapositori akawanda munyika anonzi ari kurambidza vana vawo kubayiwa nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakawanda zvinobata vana vane makore gumi nemashanu zvichidzika.
Zvikwata zveCaps United neDynamos zviri panguva yakaoma mumakundano eChibuku Super Cup ayo ari kupinda munharaunda yepiri mangwana.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muhupenyu hwavo.